IINYANISO EZISIXHENXE NGAWE - UNXIBELELWANO
Iinyaniso ezisixhenxe Ngawe
(Inqaku loMhleli: Oku kulandelayo sisicatshulwa esivela kwincwadi Wanga loo Frog: Iindlela ezili-12 eziKhulu zokuGuqula izinto ezingalunganga zibe ziPosios ebomini bakho nasemsebenzini Ngu-Brian Tracy kunye noChristina Tracy Stein. UBrian Tracy ungusihlalo kunye ne-CEO yeBrian Tracy International. Njengesithethi esiphambili kunye nenkokeli yesemina, uthetha nabantu abangaphezulu kwama-250,000 ngonyaka. Ungumbhali othengisa kakhulu ngaphezu kweencwadi ezingamashumi amahlanu eziye zaguqulelwa kwiilwimi ezininzi. UChristina Tracy Stein yingcali yezengqondo kwizenzo zabucala. Usebenzisana nabaxhasi bakhe ukubanceda benze ubudlelwane obuzalisekayo, baphuhlise iindlela zokujongana noxinzelelo kunye noxinzelelo, kwaye bafumane ukonwaba okukhulu kunye nolwaneliseko ebomini babo. Usebenza njengomqeqeshi wophuhliso lobuqu kunye nobungcali apho aququzelela ngokuthe ngqo ukukhula kwabaxumi bakhe. Ngolwazi oluthe kratya malunga noBrian Tracy, nceda undwendwele iwebhusayithi yakhe uze umlandele Facebook kwaye Twitter .
Imeko yakho yendalo kukuzonwabisa, uxolo, uvuyo, kunye nokuzonwabisa ngokuba uphile. Kule meko yendalo uvuka rhoqo kusasa unomdla wokuqalisa usuku. Uziva umhle ngawe kunye nobudlelwane bakho nabantu ebomini bakho. Uyawonwabela umsebenzi wakho kwaye ufumana ulwaneliseko olukhulu ngokwenza igalelo elenza umahluko. Injongo yakho ephambili kufuneka ibe kukucwangcisa ubomi bakho ngendlela enokuba yindlela oziva ngayo ixesha elininzi.
umahluko phakathi kovuyo nolonwabo
Njengomntu osebenza ngokupheleleyo, umntu omdala oqolileyo, kufanelekile ukuba wenze izinto yonke imihla ezikushukumisela ekufezekiseni amandla akho. Kuya kufuneka uzive unombulelo ngazo zonke iintsikelelo zakho kwindawo nganye. Ukuba awonwabanga okanye awonelisekanga nakweyiphi na indawo ebomini bakho, kukho into engalunganga kwiingcinga zakho, iimvakalelo, okanye isenzo, kwaye kufuneka ilungisiwe.
Indawo yokuqala ekuvuleni amandla akho apheleleyo kukuqonda ukuba sele uyinkosana okanye inkosazana, ezantsi ngaphakathi.
Uninzi lwabantu luyonwabile njengoko bezenzela iingqondo zabo. -U-Abraham LincolnIntengiso
Nokuba uphi namhlanje, okanye yintoni oyenzileyo okanye ongayenzanga ngaphambili, kufuneka wamkele iinyaniso ezisixhenxe ezibalulekileyo ngawe njengomntu:
1. Uyindoda elungileyo nelunge kakhulu; ibalulekile kwaye ixabiseke kakhulu. Akukho mntu ubhetele kunawe okanye unesiphiwo ngakumbi kunawe.
Kuphela kuxa uthandabuza ukulunga kwakho kunye nexabiso lakho apho uqala khona ukuzibuza. Ukungakwazi ukwamkela ukuba ungumntu olungileyo kuxhomekeke kwingcambu yokungoneliseki kwakho.
2. Ubalulekile, ngeendlela ezininzi nangakumbi. Ukuqala, ubalulekile kuwe. Indalo yakho ejikeleze wena buqu. Unika intsingiselo kuyo yonke into oyibonayo okanye oyivayo. Akukho nto kwihlabathi lakho elinokubaluleka ngaphandle kokubaluleka kwakho.
Ubalulekile nakubazali bakho. Ukuzalwa kwakho kwakungumzuzu obalulekileyo ebomini babo, kwaye njengoko ukhula, phantse yonke into oyenzileyo yayinentsingiselo kubo.
Ubalulekile kusapho lwakho, kwiqabane lakho okanye iqabane lakho, abantwana bakho, kunye namanye amalungu esangqa sentlalo yakho. Ezinye zezinto ozenzayo okanye ozithethayo zinempembelelo enkulu kubo.Intengiso
Ubalulekile kwinkampani yakho, kubathengi bakho, kubantu osebenza nabo nakwindawo ohlala kuyo. Izinto ozenzayo okanye ongazenziyo zinokuba nefuthe elikhulu kubomi nasemsebenzini wabanye.
Indlela oziva ubaluleke ngayo ubukhulu becala imisela umgangatho wobomi bakho. Abantu abonwabileyo, abaphumeleleyo baziva bebalulekile kwaye bexabisekile. Ngenxa yokuba baziva kwaye besenza ngale ndlela, iba yinyani kubo.
Abantu abangonwabanga, nabanodano baziva bengabalulekanga kwaye bengaxabisekanga. Baziva bekhathazekile kwaye bengafaneleki. Baziva ndingalunganga ngokwaneleyo, kwaye ngenxa yoko bayangxola kwihlabathi kwaye bazibandakanye ekuziphatheni okwenzakalisa bona kunye nabanye.
Abaqondi ukuba banokuba yinkosana okanye inkosazana ngaphakathi.
3. Unamandla angenamda kunye namandla okwenza ubomi bakho kunye nehlabathi lakho ngendlela onqwenela ngayo. Awunakho ukusebenzisa onke amandla akho ukuba ubunokuphila ikhulu lexesha lokuphila.
Nokuba wenze ntoni ukuza kuthi ga ngoku, yinto nje ebonisa ukuba kunokwenzeka ntoni kuwe. Kwaye ngakumbi iitalente zakho zendalo kunye nobuchule obukhulayo okwangoku, kokukhona unokukhula kwinqanaba elizayo.Intengiso
Inkolelo yakho kumandla akho angenamda sisitshixo sokuba yiyo yonke into onakho ukuba yiyo.
Udala umhlaba wakho ngandlela zonke ngendlela ocinga ngayo kunye nobunzulu bezinkolelo zakho. Iinkolelo zakho zakha ubunyani bakho, kwaye zonke iinkolelo onazo ngawe uzifundile, ukuqala ebusaneni. Into emangazayo kukuba uninzi lweenkolelo ezimbi okanye zokuzikhawulela kunye namathandabuzo aphazamisa ulonwabo kunye nempumelelo yakho ayisekelwanga kwinyani okanye kwinyani konke konke.
Xa uqala ukubuza iinkolelo zakho zokuzikhawulela kunye nokuphuhlisa iinkolelo ezihambelana nomntu omangalisayo onguye, ubomi bakho buya kuqala ukutshintsha phantse kwangoko.
5. Uhlala ukhululekile ukukhetha umxholo weengcinga zakho kunye nolwalathiso lobomi bakho. Inye into onolawulo olupheleleyo kuyo bubomi bakho bangaphakathi kunye nokucinga kwakho. Unokuthatha isigqibo sokucinga ukonwaba, ukuzalisekisa, ukukhuthaza iingcinga ezikhokelela kwizenzo ezilungileyo kunye neziphumo. Okanye unakho, ngokungagqibekanga, ugqibe ukukhetha izinto ezingalunganga, ezizimeleyo ezikukhubekisayo kwaye zikubambe umva.
Ingqondo yakho ifana negadi: ukuba awuzilimi ngabom iintyatyambo, ukhula luya kukhula ngokuzenzekelayo ngaphandle komzamo owenzayo. Ukuba awutyali ngabom kwaye uhlakulele iingcinga ezintle, iingcinga ezimbi ziya kukhula endaweni yazo.
Lo mzekeliso ulula malunga nomyezo uchaza ukuba kutheni abantu abaninzi bengonwabanga kwaye bengazi ukuba kutheni.Intengiso
6. Ubekwe kulo mhlaba kunye nekamva elimnandi: wenzelwe ukwenza into entle ngobomi bakho. Unendibaniselwano eyahlukileyo yeetalente, ubuchule, izimvo, ukuqonda, kunye namava akwenza wahluke kuye nakubani na owakha waphila. Uyilelwe ukuba uphumelele kwaye ubunjelwe ubukhulu.
Ukwamkelwa okanye ukungamkelwa kwakho kweli nqanaba ubukhulu becala kumisela ubungakanani beenjongo ozibekileyo, amandla akho okuzingisa phambi kobunzima, ukuphakama kwempumelelo yakho, kunye nolwalathiso lobomi bakho.
7. Akukho mida kwinto onokuyenza, ubenayo, okanye ube nayo ngaphandle kwemida obeka kuyo ukucinga kwakho nokucinga kwakho. Ezona ntshaba zinkulu uya kuze ujongane nazo ngamathandabuzo akho kunye noloyiko lwakho. Ezi zinto zihlala ziinkolelo ezingathandekiyo, hayi ezisekwe kwinyani, ozamkeleyo kule minyaka idlulileyo de ungasayi kubabuza.
As Shakespeare wrote in The Tempest, What's past is prologue. Yonke into eyenzekileyo kuwe kwixa elidlulileyo ibikukulungiselela ubomi obumnandi obuphambi kwakho kwikamva.
Khumbula umthetho: Ayinamsebenzi ukuba uvela phi; yonke into ebaluleke kakhulu apho uya khona.
xa unosuku olubi
Kuprintwe kwakhona kwincwadi ethi Kiss That Frog! ngemvume ye Abapapashi beBerrett-Koehler , 2012 Intengiso
(Ityala lemifanekiso: Inyaniso, ikhulisiwe ngeShutterstock)
indlela yokufikelela kwiwebhu ngokunzulu ngokukhuselekileyo
udlala njani iifayile zeavi
yeyiphi incwadi ekufuneka ndiyifundile
izongezo zokunceda umntwana akhule abe mde
Ukufunda Imfundo Yabantwana Uluhlu Olukhulu Loyilo Loyilo Ukhuselo Lokusingqongileyo 2 Sebenza